Mukomana Wekupera - Tudzaa | Home
Tudzaa Apr 8, 2021 07:52 364
Yaa ndazvarwa patsva sezvo ndisisina sugar mumastreets ndazobvuma kuti ndapera. Handisisina kana nharo dzandichaita kana kupikisa ndabvuma defeat.Zvinombotanga zvichirema but haa unotozongozvigamuchira.
Plus futi ndanzwa nema tags nema subs mumastreets.Pane matweets anenge achitaurwa nezvevanhu vapera mumastreets.
Comment section inenge yakazara twuma tudza tudza or vamwe unongonzwa vakuti chikomana chepaRuwa ichi.Ndiani umwe wekuRuwa apera besides ini kkk chi sub chakatonanga ini direct.
Yaa new me Mukomana Wekupera